Xaflad xusuus iyo duco ah oo Muqdisho loogu sameeyay Marxuum Yuusuf Afgooye – Radio Muqdisho
Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa Xaflad duco iyo xusuus ah maanta ugu qabatay xarunteeda Marxuum Sheekh Yuusuf Cali Maxamed (Yuusuf Afgooye) oo May 28, 2018 ku geeriyooday Deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka koonfureed ee Muqdisho.
Xafladan ducada ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiirro, Xildhibaanno ka kala tirsan labada aqal ee Baarlamaanka, qaar ka mid ah danjirayaasha Soomaaliya, qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada, diblomaasiyiin, samadoonno, indheer garad, aqoonyahanno iyo dad wax ku ool u ah bulshada, waxa ayna dhammaantooda Allah uga baryeen Marxuum Sheekh Yuusuf Cali Maxamed (Yuusuf Afgooye) in hoygiisa ka dhigo Jannada sare ee Alfardows.
Agaasimaha Waaxda Carabta ahna Guddoomiyaha Guddiga qaban-qaabada munaasabadda Mudane Mustafa Aadam Dagaal ayaa sheegay in Wasaaraddu horrumarin ku samayn doonto habka ay ku sagootiso diblomaasiyiinteeda iyo safiirradeeda ka geeriyooda.
Hadallo ay xafladda ka kala jeediyeen Danjire Cabdisalaam Xaaji Axmed Liibaan iyo Eng. Saalax Sheekh Cusmaan, Wasiirkii hore ee Howlaha guud iyo Guriyeynta ee Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay si wadajir ah ammaan iyo boggaadin u jeediyeen howlihii uu qaranka u qabtay Marxuum Sheekh Yuusuf Cali Maxamed (Yuusuf Afgooye), iyaga oo Allah uga baryay in qabrigiisa ka dhigo beer jannaad.
Xoghayaha Joogtada Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Danjire Cali Maxamed Cali “Cali bin Cali” ayaa ka qeybgalayaasha xafladda xusuusiyay in naf waliba ay geeri dhadhamin doonto waqtigeeda, dadkana looga baahan yahay inay ku waano qaataan, xusuusnaadaan Allah, waxaana uu u duceeyay saaxiibkiisii Marxuum Sheekh Yuusuf Cali Maxamed (Yuusuf Afgooye) inuu u nuuriyo xabaasha, iilka neecaw udgooniyo, ku siiyo naruuro.
Wasiir kuxigeenka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya H.E. Mr. Mukhtar Mahad Daud, ayaa saraakiisha iyo agaasinnada kala duwan ee Wasaaraddiisa uga mahadceliyay sida had iyo jeer ay u maamuusaan aaska iyo xafladda duco ee ay u qabtaan saaxiibadooda shaqada ee geeridu ay haleesho, isagoo ammaanay howlihii shaqo ee uu qabtay Sheekh Yuusuf Cali Maxamed (Yuusuf Afgooye) inta aanu geeriyoon, waxaana uu Allah uga baryay dembi dhaaf iyo naxariis.
Agaasimaha SONNA oo Tababar u furay Shaqaale ka tirsan Wakaaladda